Iska Hor’imaad Ka Dhacay Degmada Diinsoor. – Bogga Calamada.com
Iska Hor’imaad Ka Dhacay Degmada Diinsoor.
September 19, 2017 7:16 am Views: 190
Maleeshiyaat kala taabacsan maamulada Shariif Sakiin iyo Farmaajo ayaa ku dagaalamay gudaha degmada Diinsoor oo ka mid ah goobaha ciidamada Xabashida Itoobiya kaga suganyihiin gobalada Baay iyo Bakool.
Iska hor,imaadkan oo labada maleeshiyo ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan waxa uu sababay khasaara dhimasho iyo dhaawac ah oo soo kala gaartay maleeshiyaatka kala taabacsan maamulada gaala raacyada ah ee Farmaajo iyo Shariif Sakiin.
Saraakiisha maleeshiyaatkan ayaa ku murmay halka ay ka baxeen Rasaas iyo Qoryo la waayay waxa uu muranka ugu dambeyntii sababay iska hor imaad xoogan oo muddo socday.
Warar hoose oo laga helayo degmada Diinsoor waxey sheegayaan in iska hor imaadka uu sababay ku dhawaad Shan askari oo labada dhinac ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday iska hor imaadka,iyadoona wali xaalad kacsanaan ah ay ka taagantahay degmadaasi.